Yosua 10 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
10 Afei bere a Yerusalem hene Adoni-Sedek tee sɛ Yosua ako afa Ai,+ na wasɛe+ Ai ne ne hene+ sɛnea ɔyɛɛ Yeriko+ ne ne hene,+ na Gibeonfo ne Israel akɔyɛ asomdwoe apam+ na wɔne wɔn te no, 2 ehu kaa no+ efisɛ na Gibeon yɛ kurow kɛse te sɛ nhenkurow no bi. Bio nso na ɛsõ sen Ai+ koraa, na emu mmarima ho yɛ den. 3 Enti Yerusalem+ hene Adoni-Sedek soma kɔɔ Hebron+ hene Hoham ne Yamut hene+ Piram ne Lakis+ hene Yafia ne Eglon+ hene Debir nkyɛn sɛ, 4 “Mommɛboa me mma yɛnsɛe Gibeon efisɛ wɔne Yosua ne Israelfo akɔyɛ asomdwoe apam.”+ 5 Enti Amorifo+ ahene baanum no kaa wɔn ho boom, Yerusalem hene ne Hebron hene ne Yarmut hene ne Lakis hene ne Eglon hene ne wɔn dɔm nyinaa, na wɔboaa wɔn ano sɛ wɔbɛkɔ Gibeon so ne wɔn akɔko. 6 Ɛnna Gibeonfo soma kɔka kyerɛɛ Yosua wɔ Gilgal+ sɛ: “Yɛ ntɛm bɛboa wo nkoa na gye yɛn. Mma wo nsa nnyɛ tia,+ efisɛ Amorifo ahene a wɔte mmepɔw so no aboaboa wɔn ano ne yɛn rebɛko.” 7 Enti Yosua ne asraafo ne nnɔmmarima+ a wɔka ne ho+ nyinaa fii Gilgal kɔe. 8 Na Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Nsuro wɔn+ na mede wɔn ahyɛ wo nsa.+ Wɔn mu biara rentumi nnyina w’anim.”+ 9 Afei Yosua baa wɔn so mpofirim. Ɔde anadwo mũ no nyinaa na efii Gilgal bae. 10 Yehowa maa wɔn ani tanee wɔ Israelfo no anim,+ na wɔde nkrante kunkum dɔm kɛse wɔ Gibeon.+ Na wotiw wɔn faa Bet-Horon aforoe, na wokunkum wɔn beduu Aseka+ ne Makeda.+ 11 Bere a wɔreguan afi Israelfo anim, na wɔresian Bet-Horon no, Yehowa maa abo akɛse+ fii soro bekunkum wɔn koduu Aseka. Wɔn a amparuwbo kunkum wɔn no dɔɔso sen wɔn a Israelfo de nkrante kunkum wɔn no. 12 Da a Yehowa de Amorifo hyɛɛ Israelfo nsa no, Yosua ne Yehowa kasae, na ɔkae wɔ Israelfo nyinaa anim sɛ:“Owia,+ gyina Gibeon+ so,Ɔsram, gyina Ayalon+ bon mu.” 13 Enti owia gyinae, na ɔsram nso gyinae kosii sɛ ɔman no tuaa n’atamfo ka.+ So wɔnkyerɛw eyi ho asɛm wɔ Yasar+ nhoma mu? Owia gyinae wɔ wim, na ampere ne ho ankɔtɔ bɛyɛ da mũ nyinaa.+ 14 Da yi sɛso mmae da—n’anim oo, n’akyi oo, ebi nsii da—sɛ Yehowa bɛyɛ aso ama onipa wɔ saa kwan yi so.+ Saa da no, na Yehowa ankasa reko ama Israel.+ 15 Afei Yosua ne Israelfo nyinaa san baa wɔn asoɛe wɔ Gilgal.+ 16 Saa bere yi na ahene baanum no aguan+ akɔhyɛ ɔbodan mu wɔ Makeda.+ 17 Ɛnna nkurɔfo bɛka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Wɔahu sɛ ahene baanum no aguan akɔhyɛ ɔbodan mu wɔ Makeda.”+ 18 Na Yosua kae sɛ: “Mumpia abo akɛse nkata ɔbodan no ano na momma mmarima nwɛn wɔn. 19 Na mo nso munnnyina faako. Muntiw mo atamfo no nkunkum wɔn.+ Mommma wɔnnkɔ wɔn kurom, na Yehowa mo Nyankopɔn de wɔn ahyɛ mo nsa.”+ 20 Afei bere a Yosua ne Israelfo no kunkum nkurɔfo no maa wɔn nyinaa sae,+ na wɔn a wonyaa wɔn ti didii mu no guan kɔɔ nkurow a wɔatoto ho afasu+ mu no, 21 ɔman no nyinaa san baa Yosua nkyɛn asomdwoe mu wɔ Makeda, wɔn asoɛe hɔ. Na obiara antwe ne tɛkrɛma mpo antia Israelfo no.+ 22 Afei Yosua kae sɛ: “Mummue ɔbodan no ano na munyi ahene baanum a wɔhyɛ hɔ no mmrɛ me.” 23 Wɔyɛɛ nea ɔkae no, na woyii ahene baanum yi fii ɔbodan no mu brɛɛ no: Yerusalem hene,+ Hebron+ hene, Yamut hene, Lakis hene,+ ne Eglon hene.+ 24 Bere a wɔde ahene yi brɛɛ Yosua no, ɔfrɛɛ Israel mmarima nyinaa na ɔka kyerɛɛ asraafo mpanyimfo a wɔne no kɔe no sɛ: “Mommra. Momfa mo nan nsisi ahene yi kɔn akyi.”+ Na wɔbae de wɔn nan besisii wɔn kɔn akyi.+ 25 Na Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnsuro na mommmɔ hu.+ Momma mo bo nyɛ duru na mo ho nyɛ den, na sɛɛ na Yehowa bɛyɛ mo atamfo a mo ne wɔn redi ako nyinaa.”+ 26 Afei Yosua kunkum wɔn, na ɔde wɔn sensɛn nnua anum so kosii anwummere.+ 27 Na bere a owia kɔtɔe no, Yosua ma woyii wɔn fii nnua no so,+ na wɔkɔtow wɔn guu ɔbodan a wɔkɔhyɛɛ mu no mu. Na wɔde abo akɛse guu ɔbodan no ano besi nnɛ. 28 Saa da no, Yosua faa Makeda,+ na ɔtwee nkrante too kurow no so, na okum ɔhene no ne akra a wɔwɔ kurow no mu nyinaa.+ Wannyaw obiara wɔ hɔ. Na sɛnea ɔyɛɛ Yeriko hene no, saa ara na ɔyɛɛ Makeda hene+ nso. 29 Afei Yosua ne Israelfo nyinaa fii Makeda kɔɔ Libna ne Libnafo+ kɔkoe. 30 Na Yehowa de kurow no ne ɛhɔ hene hyɛɛ Israel nsa, na wɔtwee nkrante wɔ kurow no so kunkum akra a wɔwɔ hɔ nyinaa. Wɔannyaw obiara. Na sɛnea wɔyɛɛ Yeriko hene no, saa ara na wɔyɛɛ kurom hɔ hene no nso.+ 31 Ɛno akyi no, Yosua ne Israelfo nyinaa fii Libna kɔɔ Lakis,+ na wɔboaa wɔn ho ano ne wɔn kɔkoe. 32 Na Yehowa de Lakis hyɛɛ Israel nsa, na da a ɛto so abien no, wɔfaa kurow no. Afei wɔtwee nkrante wɔ kurow no so kunkum akra a wɔwɔ hɔ nyinaa,+ sɛnea wɔyɛɛ Libna no. 33 Na Geser hene+ Horam huu saa no, ɔkɔe sɛ ɔrekɔboa Lakis. Enti Yosua kum ɔne ne nkurɔfo nyinaa, na wannyaw obiara.+ 34 Ɛnna Yosua ne Israelfo nyinaa fii Lakis kɔɔ Eglon,+ na wɔboaa wɔn ho ano ne wɔn kɔkoe. 35 Na wɔfaa kurow no saa da no. Na wɔtwee nkrante too so kunkum akra a wɔwɔ hɔ nyinaa saa da no, sɛnea wɔyɛɛ Lakis no.+ 36 Afei Yosua ne Israelfo nyinaa fii Eglon kɔɔ Hebron+ ne wɔn kɔkoe. 37 Na wɔfaa kurow no ne ne nkuraa nyinaa, na wɔtwee nkrante wɔ so. Na wokum ɔhene no ne akra a wɔwɔ hɔ nyinaa. Wannyaw obiara, sɛnea ɔyɛɛ Eglon no. Enti ɔsɛee kurow no ne akra a wɔwɔ hɔ nyinaa.+ 38 Akyiri yi Yosua ne Israelfo nyinaa san baa Debir+ ne wɔn bɛkoe. 39 Na ɔfaa kurow no ne ɛhɔ hene ne nkuraa a ɛwowɔ hɔ nyinaa. Na wɔtwee nkrante wɔ so kunkum akra a wɔwɔ hɔ nyinaa.+ Wannyaw obiara.+ Na sɛnea ɔyɛɛ Hebron ne Libna ne ne hene no, saa ara na ɔyɛɛ Debir ne ne hene.+ 40 Enti Yosua sɛee nsase a ɛwɔ mmepɔw so+ ne Negeb+ ne Sefela+ ne nkoko ase+ no nyinaa, na okunkum wɔn ahene nyinaa. Wannyaw obiara. Ɔsɛee+ biribiara a ɛhome+ sɛnea Israel Nyankopɔn Yehowa hyɛe no.+ 41 Na Yosua de nkrante faa asase no nyinaa so fi Kades-Barnea+ kosi Gasa,+ ne Gosen+ asase nyinaa de kɔpem Gibeon.+ 42 Yosua faa ahene yi nyinaa ne wɔn nsase prɛko,+ efisɛ Israel Nyankopɔn Yehowa ko maa Israel.+ 43 Afei Yosua ne Israelfo nyinaa san kɔɔ wɔn asoɛe wɔ Gilgal.+